War Deg Deg Ah : Khaliif Cabdi Cumar oo goordhaw ku guuleestay in uu kamid Noqdo Aqalka Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 4 December 2016
Waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle mar kale ka socota doorashada Xubnaha Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaana maanta magaaladaasi lagu dooranaa dhoor kursi.
Doorasho goordhaw ka dhacday xarunta doorashooyinka magaalada Jowhar laguna dooranayay kursiga Jufada Maamiye Xamaud ee Beesha Baadi Cadde, waxaana kursigaasi ku guuleestay oo loo doortay Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Khaliif Cabdi Cumar.
Kursigan waxaa ku tartamayay afar Musharax oo kala ahaa Khaliif Cabdi Cumar oo helay 28-cod ,Axmed C/raxiim Malaria oo helay 16-cod, C/Laahi Cabdi Bariise oo helay 4 cod iyo Guuleed Cabdulaahi Macalin oo isna helay 3-cod.
Guddiga Doorashooyinka dadban ee Maamulka Hirshabelle ayaa shaaciyay in Khaliif Cabdi Cumar oo helay 28-cod uu ku guuleestay kursigaasi.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada Jowhar ayaana aheed mid xiiso gaar ah laheed, waxaana Musharaxa ku guuleestay Kursigan uu yahay Siyaasi taageero badan ka heestay beesha uu kasoo jeedo iyo guud ahaan Bulshada gobolka Hiiraan.